Komitin'ny zon'olombelona mikambana momba ny zon'ny ankizy hijerena an'i Arzantina, Angola, Algeria, Montenegro, Russia, Lesotho ary Norvezy
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Komitin'ny zon'olombelona mikambana momba ny zon'ny ankizy hijerena an'i Arzantina, Angola, Algeria, Montenegro, Russia, Lesotho ary Norvezy
Enga anie 11, 2018
Ny komity mikambana momba ny zon'ny zaza dia hivory any Genève manomboka amin'ny 14 Mey ka hatramin'ny 1 Jona 2018 hijerena ny zon'ny ankizy any amin'ireto firenena manaraka ireto: Arzantina, Angola, Algeria, Montenegro, Federasiona Rosiana, Lesotho ary Norvezy.
Ny Komity, izay misy manam-pahaizana mahaleo tena 18, dia manara-maso ny fomba fanaovan'ireo Fanjakana nanaiky ny Fifanarahana momba ny zon'ny ankizy (CRC) amin'ny adidiny; Arzantina, Angola, Montenegro, Lesotho ary Norvezy dia hojerena ao anatin'io Fifanarahana io.
Hodinihin'ny Komity ihany koa ny fanarahana ny Angola sy ny Federasiona Rosiana amin'ny Protocol Optional amin'ny fivarotana ankizy, fivarotan-tena amin'ny ankizy ary pôrnôgrafia ho an'ny ankizy (OPSC). Hodinihina bebe kokoa ny fanarahana ny Angola sy Algeria amin'ny Protocol Optional momba ny firotsahan'ny ankizy amin'ny ady mitam-piadiana (OPAC).
Ireo firenena izay mifanatrika amin'ny Fifanarahana sy / na ireo Protocole roa tsy voatery hataony dia tsy maintsy mandefa tatitra an-tsoratra matetika any amin'ny Komity. Nandritra ny fivoriana tany Genève, ireo mpikambana ao amin'ny Komity dia manao fotoam-panontaniana sy valiny amin'ireo delegasionina avy amin'ny governemanta. Ny komity dia miorina amin'ny fanombatombanana ny tatitry ny antokom-panjakana ary ny valiny an-tsoratra amin'ny lisitry ny olana CRC, ny valin-kafatry ny solontena ary koa ny fampahalalana avy amin'ny fikambanan'ny ONU sy ONG hafa.
Ny CRC dia hamoaka ny zavatra hitany, fantatra amin'ny fanamarihana famaranana amin'ny Alarobia 6 Jona 2018. Valan-dresaka ho fampahalalana vaovao iray hanolorana ireo zavatra hita ireo dia natao tamin'ny 12:30 ihany tao amin'ny Press Room 1 tao amin'ny Palais des Nations any Genève.
Princess Cruises dia mandray ny takelaka kintana malaza Hollywood Walk of Fame
New York City Comptroller: Airbnb mampiakatra hofan-trano, manafina ny zava-misy momba ny asany any NYC
55 minitra lasa izay